အနုပညာရှင်များ | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
တချိန်က ဆိုတာတွေကို နှလုံးသားထဲ သိမ်းထားမလား၊ ဦးနှောက်ထဲ သိမ်းထားမလား။ ကိုယ်က ရွေးချယ်နေရတုန်း။
ခေတ်ဆိုးကြီးတခေတ်ကို ဖြတ်သန်းလိုက်ရတဲ့အခါ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဓားစာခံခေါ်ခေါ်၊ သားကောင်ခေါ်ခေါ် အဲဒီလိုလူတွေ အများကြီးကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကုစားမှုပေးရမယ်။ ပြန်လည်ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးရမယ်။ ဒါကိုမလုပ်ပဲနဲ့ ခေတ်သစ်တခု ထူထောင်လို့မရဘူး။ အကူးအပြောင်းကာလမှာ တရားမျှတမှုကို ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားတာဟာ ဒါကြောင့်ပဲ။
Soe Nay Lynn
တကွေ့ကွေ့မှာ တို့လူထုရဲ့ တရားသစ္စာ
ဟိုးက ကောင်းကင်ပေါ်မှာ နွေဦးဟာ ကျနော်တို့ကို စောင့်နေပါ့၊ လာခဲ့ကြတော့ လာခဲ့ကြတော့ ဟေ့ တဲ့။ အရုဏ်ဦးမှာ နှင်းဆီတထောင်ခူးဆွတ် နိုင်ငံတော်သစ်ကို ဦးညွတ်ဖို့အတွက် နွေဦးခေါ်သံဟာ ထိုး ထွက် လာခဲ့ပြီ။
တကယ်တော့ ကျနော့် ပုဂ္ဂလိက ဘဝကို သိပ်မရေးချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လူလားမြောက်အောင်၊ ကျနော် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ချစ်တတ်အောင်၊ ကျနော် ပြည်တွင်းစစ်ကိုနားလည်အောင်အဓိကသင်ပေးတဲ့ လက်ဦးဆရာက ကျနော့်အဖေပါ....
ရာသီများ ပြောင်းသလို အချိန်ကာလများ အခြေအနများ ပြောင်းခဲ့ပြီ။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ စိတ်များ ယုံကြည်ချက်များ မပြောင်းလဲသေးပါ။
ကျနော်တို့ဟာ မီးလောင်နေတဲ့ အတောင်ပံများနဲ့ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ဘယ်မှမရွေ့တဲ့ လေယာဉ် နံရံအတွင်းထဲမှာပါ။ ကျနော်တို့ဟာ လောက်တဖွားဖွားနဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာပါ။ အဲဒီအထဲမှာမှ ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ့်နှလုံးသား၊ ကိုယ့်လက်နဲ့ ကဗျာကို ထိတွေ့ခွင့် ရခဲ့ရပါတယ်။
အခုလို ဆာလောင်မွတ်သိပ် နေရတာကိုက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။ လောကကြီးဟာ မိဘဝတ္တရားကျေပွန်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီအတိုင်း ပစ်မထားခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကသာ ရွေးချယ်မှုနောက် လိုက်ခဲ့တာပါ။
ခုချိန်ဆို ဒေါနမှာ တောမီးတွေ လောင်စပြုပြီပဲ။ ပေါက်လဲနဲ့ ပဒတ်စာတွေလည်း နေထဲ မီးထဲမှာ ရဲရဲပွင့် အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်ကြရော့မယ်။ ဒါကိုပဲ သေကောင်ပေါင်းလဲ ငါချစ်ခဲ့။
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက “ရေဆာတယ်၊ ထမင်းဆာတယ်၊ အချစ်စာတယ်”လို့ ခေတ်ရဲ့ ဆာလောင်မှုကို ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုထိလည်း အာသာမပြေနိုင်သေးတဲ့ခေတ်မှာ လူဖြစ်နေရဆဲပါပဲ။
လေဆန်မှာ မြှားတန်းလန်းနဲ့ ပျံသန်းရဲတဲ့ငှက်သာ မနက်ဖြန်အတွက် ဖြစ်တယ်
Darkness isaterrible thing. Darkness of ego, darkness of jealousy, darkness of greed, darkness of not knowing, darkness of lacking wisdom, I mean all kinds of darkness. If we wanted to say that may you be escaped from all kind of darkness, have to try to break through the darkness.
ကျနော် ငယ်ငယ်လေးထဲက ကဗျာရေးသားခြင်း ရွတ်ဖတ်ခြင်းကို ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ အခု အသက်ကြီးလာတော့လဲ အဲဒီလိုပါပဲ။ သေတဲ့အထိလဲ ဒီလိုပဲ နေမှာပါ။ အဲဒါ ကျနော့်ရဲ့ နေထိုင်မှုပါပဲ။
တွေ့မိ မြင်မိ ကြုံတွေ့သမျှလေးတွေကို ခံစားမိလို့ ရေးထားတာပါ။ အဲဒါလေးတွေကို ကျနော် မျှဝေတာပါ
ကျွန် တော့် အတွက် တော့ က ဗျာဆိုတာ ကျွန် တော် ကိုယ် တိုင် ရိုက် ခွဲလိုက် တဲ့ရေဒီယိုက လေးထဲက တဂျစ် ဂျစ် မြည် နေတဲ့အသံက လေးလည်းဖြစ် နိုင် ပါတယ် ...။ အောင်ကိုကိုလတ်(တမူး)
ကိုဇော် (ကလေးမြို့ )
ဘယ်အချိန်မဆို မီးထတောက်လားတောက်ရဲ့ ဘယ်နေရာမဆိုပေါက်ကွဲနိုင် ဘယ်သူမဆို ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့တယ် ဒါနဲ့တောင် ငါတို့ ဟာ ဘာမှမဖြစ်အောင်နေခဲ့တယ် အခုထိအသက်ရှင်နေရတယ် ဒါ့ထက်နာကျင်ရတာ ဘာရှိသေးလို့လဲ
”ချစ်တဲ့နန်းရေ ...စိတ်ဓာတ်ကို မြားမမှန်နိုင်ဘူး”ဆိုတဲ့ မောင်အောင်ပွင့်ရဲ့  အကြီးမားဆုံးအတ္တကတော့ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးညစာ စားချင်တာပါပဲ။
Aung Hmu Wai
Htet Lu Aung
အနုပညာဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး တီထွင်ကြံဆရတာပါ၊ သဘာဝတရားရယ် ဘဝခံစားချက်တွေရယ်အပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးဖန်တီးယူရတာဟာ အနုပညာပါ။ ပြိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်သာ ကိုယ်တိုင်ပြိုင်ရတာ၊ ငါမနေ့က ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ! ငါ ဒီနေ့ဘာဖန်တီးခဲ့သလဲ၊ နက်ဖြန်ငါ ဘာအနုပညာဖန်တီးမလဲ...ဆိုတာတွေပဲ..အဲဒါတွေဟာ အတွေ့အကြုံနဲ့ အများကြီးဆိုင်ပါတယ်၊ ပါရမီနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်၊ လုံ့လ ဝိရိယနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်။ သူတပါး တီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာတခုကို တုပပြီးသော်လည်းကောင်း၊ အတုခိုးပြီးမူရင်းကိုပြန်ကူးပြီးကိုယ်ဖန်တီးသယောင်ပြုမူခြင်းတွေဟာ အနုပညာမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒါတွေက အတတ်ပညာသာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာဆိုတာကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ဟာလဲ အနုပညာရှင်လား...အတတ်ပညာရှင်လားဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Go Go Maw Ya Myaing